Maxaa ka jira arrinta ah in C/raxmaan Faroole iyo Jibriil Ibraahim ay sameysteen isbaheysi siyaasadeed? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa ka jira arrinta ah in C/raxmaan Faroole iyo Jibriil Ibraahim ay sameysteen isbaheysi siyaasadeed?
Inkastoo marba marka kasii dambeeyso ay sii xoogeysaneyso ololaha doorashada 2016-ka ee loogu jiro kuraasta labada Aqal ee Baarlamaanka cusub iyo xilka madaxtinimadda Soomaaliya ayaa hadane waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan isbaheysi siyaasadeed oo musharixiinta ka dhaxeeya.
Musharaxa dhalinyaradda ah Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ilaa iyo haatan muujiyay inuu yahay musharaxa ugu dhaq-dhaqaaqa badan ayaa waxaa soo baxaya inuu isbaheysi hoose kula jiro musharaxa kale C/raxmaan Faroole.
Arrintaan ayaa markii ugu horeeysay soo shaac-baxday kadib xafladii uu musharax Jibriil uga dhawaaqay musharaxnimadiisa, xilligaas oo garabkiisa lagu arkay nin uu adeer u yahay C/raxmaan Faroole laguna magacaabo Ciiro Axmed.
Dhinaca kale, socdaalka uu musharax Jibriil ku tagay magaalada Garoowe iyo soo dhaweyntii uu soo dhaweeyay guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Fara-weyne oo isna ah nin uu adeer u yahay C/raxmaan Faroole ayaa waxay sii kordhisay shakiga ku saabsan xiriirka isbaheysi ee qarsoon una dhaxeeya musharixiinta Faroole iyo Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Ugu dambeyntii, isbaheysiyada siyaasadeed ee doorashada dalka ayaa caadiyan soo if-baxa xilliyada ugu dambeeysa doorashada, laakiin warbaahinta Bulshoweyn ayaa si hoose u ogaatay in musharixiin badan oo doonayay inay tagaan deegaanada Puntland loo diiday.